Thermomix TM5 vaovao | ThermoRecipes
Androany Alatsinainy dia amidy any Espana ilay vaovao. New Thermomix TM5 izay natolotry ny zoma manerantany Vorwerk.
Miaraka amin'ity robot lakozia ity dia nohatsarain'izy ireo ny endrika samihafa amin'ilay maodely malaza TM31 hahafahana mampifanaraka ny filan'ny mpampiasa.
Fa andao handeha amin'ny ampahany:
1 Inona no novan'izy ireo?
2 Ary ny vidiny?
3 Te hividy ny Thermomix TM5 aho
Inona no novan'izy ireo?
Ankoatry ny endrika ergonomika sy nohavaozina kokoa, Vorwerk dia nanao fanovana hafa toy ny tamin'ny Varoma ary ao amin'ny fitaratra iza no manana a habe lehibe kokoa. Tsy hoe mihoa-pefy ny fahasamihafana, fa mety kokoa amin'ny fianakaviana lehibe izany. Ilay varoma vaovao dia manana 3,3 litatra sy 2,2 vera ny vera.
Nohavaozina koa ny kaopy sy ny lolo. Ny famolavolana dia tena mitovy fa maoderina kokoa hanatanteraka tsara ny asany.
Raha nisy fiovana lehibe teo amin'ny fonony izay nanidy ny fanidiana ny New Thermomix TM5 ho mandeha ho azy izy io. Ary koa amin'ny mpamantatra ny maripana, afaka mahandro amin'ny 120º ankehitriny. Ny motera dia tsy hitabataba firy ary ny bip fampitandremana dia ho hafa noho ny ankehitriny.
Ny zava-baovao iray hafa dia ny fananany a efijery ny loko sy ny mpifantina tokana izay ahafahanao mifehy ny ora, ny mari-pana ary ny hafainganana.
Nefa tsy isalasalana fa ny fandrosoana lehibe dia ny rafitr'izy ireo Fahandroana sakafo. Izy io dia fitaovana iray izay manana ny sisiny ahafahanao mampiditra ny Thermomix Digital Books. Ny fitaovana dia hampiseho ny torolàlana momba ny fomba fahandro tsikelikely, manitsy ny maripana sy ny fotoana. Amin'izany fomba izany dia tsy mila manampy ireo akora fotsiny ireo mpampiasa ary mampihetsika ny fanaraha-maso ny hafainganana.
Azoko antoka fa ho tian'ny mpampiasa vaovao ireo fanavaozana rehetra ireo, fa ahoana kosa ny amin'ireo manana izany modely hafa?
Isika izay manana ny maodely TM31 dia tsy mila matahotra satria ny fomba fahandro sy ny boky dia mifanentana tanteraka. Mbola manana fihodinana havia, mizana ary haingam-pandeha izy io, na dia antsoin'izy ireo ankehitriny hoe "function kneading".
Ary ny vidiny?
Hiankina amin'ny firenena sy ny volany avy izany. Eto Espana, ny vidiny dia 1100 € ary hampiditra ny fototry ny masinina, ny kapoaka vy tsy misy fangarony, ny harona, ny lolo sy ny spatula, ny varoma ary boky nomerika misy resipeo 197 izay misolo ny "Essential" ary mitondra ny lohateny hoe "Mahandro mahasalama sy mahasalama".
Te hividy ny Thermomix TM5 aho
Raha te hividy ilay Thermomix TM5 vaovao ianao dia mila miditra amin'ilay faritra fotsiny Vidio Thermomix TM5 na tsindrio ity rohy manaraka ity.
THERMOMIX TM5 miaraka amin'ny rehetra ...
Manantena aho fa tianao ity maodely vaovao ity!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » lahatsoratra » General » New Thermomix TM5
Namoaka ny bokinay voalohany izahay !!
Ny fomba fahandro tena tsara hitondrana antsika ho any amin'ny morontsiraka sy ny pisinina